रेडियो तमोर १०२ मेघाहर्ज गुडाउने ब्यागभरि आमाले ओमानबाट ल्याएको खुसी
आमाले छाडेदेखि नै अनुहारमा बास बसेका दुःखका प्रतिबिम्बहरू ओझेल परेका छन् । सधैं मैलो हुने लुगा सफा भएको छ ।
आमा विदेश छँदाको अँध्यारो
सनिल ६ वर्षका थिए । कीर्तिपुर माध्यामिक विद्यालयमै १ कक्षामा पढ्थे । आमा आशिका परियार २०७२ सालको चैतमा ओमान लागिन् । आमाले आफूलाई छाडेर विदेश लागेको सनिललाई पत्तै भएन ।
‘ममी विदेशमा त्यत्रो समय बस्नुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन, कति वर्षसम्म आउनुभएन,’ सनिल सम्झन्छन् । उनलाई मावल गएर फर्किए जस्तै आमा दुईचार दिनमा फर्किने आशा थियो ।
कहिल्यै आमाबाट टाढा नभएका सनिललाई आमाको अभावको भारी गह्रुँगो भयो । न घरमा बेलामा खाना पाक्थ्यो न त मैलो लुगा कसैले धोइदिन्थ्यो । आमा विदेश लागेपछि सनिलका बुवाले नै आमाको जिम्मेवारी निभाउन खोजे । तर सहज भएन ।
सनिललाई धादिङबाट हजुरआमा लिन आइन् । ‘आमासँग गाउँ गएर गाउँकै स्कुलमै पढेको अनि फेरि काठमाडौं नै आएको,’ पहिलेको कुरा सम्झिएर सनिल एकछिन टोलाए ।
बुवाले समय दिन नभ्याउने भएपछि हजुरआमासँग सनिल गाउँ त गए, तर बस्न मानेनन् । झण्डै ६ महिनापछि सनिल काठमाडौं नै फर्किए । आमा विदेश गएपछि आमाको मायासँगै एक वर्ष पढाइ पनि छुट्यो ।
मेरो लुगा धोईदिने को छ र ?
शालिन स्वभाव भए पनि बेलाबेलामा स्कुलमा साथी र शिक्षकसँग अनौठो व्यवहार गर्थे सनिल । ‘बेलाबेलामा अलि झर्कने, नबोल्ने, रिसाउने गर्थे, अरुको भन्दा फरक व्यवहार देखेर मैले उसलाई नोटिस गर्न थालें,’ कीर्तिपुर माविकी शिक्षिका मुना कार्कीले आमा विदेश जाने बित्तिकैको सनिलको व्यवहारबारे बताईन् ।
सनिल मैला लुगा लगाउँथे । ‘सनिल तिमीले किन लुगा फोहोर लगाएको, हेर त उसको लुगा कति सफा भन्दै अरुको उदाहरण दिएर सम्झाएँ, मैले भन्दासम्म उ सुनिरहयो र एक बाक्य बोल्यो – उसको पो ममी छ र लुगा धोइदिन्छन्, मेरो कसले धोइदिन्छ,’ शिक्षिका मुना त्यो बेलाको सनिलको प्रतिक्रिया सम्झन्छिन् ।
सनिलको मैलो लुगाले आमाको अभाव त झल्काउँथ्यो, तर कुरा बुझ्न सनिलले नै मुख फोर्न पर्‌यो । उनको कुराले मुनाको मन खिन्न भयो । आमाले छाडेर गएदेखि सनिलले मातृत्वको अभाव खेपेका थिए । आमा नै नभएपछि सनिलको लुगा मात्रै हैन बालापन पनि खल्बलिएको थियो ।
‘बुवा कामबाट आएपछि खाना बनाउनुहुन्थ्यो, बेलाबेलामा गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो,’ सनिल सुनाउँछन् । सनिल त्यो बेला सोच्थे ‘ममी भएको भए !’
सयौंपछिको स्मरणीय फागुनको शनिबार
आमा विदेशबाट कहिले फर्कनुहुन्छ भनेर सोध्दा सनिलको जवाफ एउटै हुन्थ्यो – ‘शनिबार ।’ झण्डै दुई वर्ष आमा ओमानमा बस्दा सनिलको पर्खाइ शनिबारकै थियोे । थुप्रै शनिबारका बिहानी आशा लिएर आए अनि साँझ निराश बनाएर फर्किए । तर आमा फर्कने शनिबार कहिल्यै आएन ।
२०७४ सालको फागुन महिनाको एक दिन सनिल ब्याग गुडाउँदै स्कुल आइपुगे । उनले आँखामा गाजल, अनि हातमा पालिस पनि लगाएका थिए । ‘नयाँ ब्याग र पालिस देखेर तिम्रो आमा आउनुभयो हो भनेर सोधें, खुसी हुँदै हो भने, सनिल आमा आएपछि त निकै खुसी छ,’ शिक्षिका मुना सुनाउँछिन् ।
नयाँ ब्याग, त्यो पनि गुडाउन मिल्ने । ब्याग स्कुल लिएर आएको दिन साथी अजय थिङ सनलिलाई देखेर दङ्ग परे । ‘मेरो बुवा त दुईपटक विदेशबाट फर्किंदा पनि यस्तो ब्याग ल्याइदिएनन्, एउटा साइकल मात्रै,’ सनिलको ब्याग हेर्दै अजयले भने ।
आमाले कीर्तिपुर बजारमा किनिदिएको ब्याग सनिलको जस्तो के हुन्थ्यो र ? ‘मेरो ब्याग त ठिकठिकैको छ, तर उसको ब्याग मन पर्छ,’ अजय फिस्स हाँसे । अजयलाई विदेश जाने बेला बुवाले राम्रोसँग बस् भने ।
तर फर्किंदा यस्तो ल्याइदिन्छु भनेका छैनन् । उनलाई मलेसियाबाट फर्किंदा आफ्नो बुवाले पनि सनिलको ममीले जस्तै ब्याग, घडी र गाडी ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
ओमानबाट आमासँगै फर्कियो सनिलको खुशी
अजयका बुवाले मलेसियाबाट फर्किंदा ब्याग, घडी र गाडी ल्याइदेलान् या नल्याइदेलान् । तर सनिलको ममीले भने ओमानबाट फर्किंदा गुड्ने ब्यागमा सनिलसँग टाढा भएका खुशी पनि भरेर ल्याएकी छन् ।
आमा फर्किएपछि सनिलको मैले लुगा लगाउनुपर्ने दिन गएको छ । भनेकै बेला खाना पाक्छ । बुवाले गाली गर्दा आमाको मायाले ढाक्छ । स्कुल जाँदा बोक्ने ब्याग पनि साथीको भन्दा खास छ । आमा फर्किएपछि सनिलको व्यवहार र पढाइ पनि फेरिएको छ । पहिले जस्तो रिसाउँदैनन् । झर्को पनि मान्दैनन् ।
करीब दुई वर्ष आमा विदेशमा बस्दा धेरै नियास्रो भोगेका सनिललाई अब आमा कहिल्यै विदेश नगइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ । तर, आमाका कुरा र भोगाई सनिलका भन्दा धेरै फरक छन् ।